बल्झियो दशकौं पुरानो सिमा विवादः खै स्थायी समाधान ? | khabarsamaya.com
बल्झियो दशकौं पुरानो सिमा विवादः खै स्थायी समाधान ?
Sunday, November 10th, 2019, 3:54 pm
काठमाडौं । २०४६ पश्चात् कम्युनिष्ट नेताहरुमा राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा कालापानी रहेको थियो । उनीहरुको माग भारतले जवर्जस्ती खोसेको नेपालको भुभाग फिर्ता हुनुपर्ने माग थियो । त्यसवेला तत्कालीन नेकपा(एमाले) नेता केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई संसदमा उठाएका थिए । उनले कालापानी स्थगन प्रस्ताव नै लिएर संसदमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यस्तै माले नेता योगेश भट्टराईले विद्यार्थी नेताहरुलाई साथमा लिएर कालापानी क्षेत्रमा मार्चपास गराएका थिए ।
यतिवेला दुवै नेता सरकारमा छन् । केपी शर्मा ओली देशका कार्यकारी प्रमुख भएर सत्ताको वागडोर सम्हालीरहेका छन् । अर्का नेता योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्रीको रुपमा आसिन छन् । अनि पुनः दशकौं पुरानो कालापानी प्रकरण दोहोरिएको छ ।
२ नोभेम्बर २०१९ का दिन भारतले उसको देशको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । नक्सामा पाकिस्तानसँग विवादमा रहेको र विशेष राज्यको दर्जा प्राप्त जम्मु र कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेशमा परिणत गरेपछि भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । उक्त नक्सामा भारतले नेपालको भुभाग लिम्पियाधुरा हुँदै कालापानी र लिपुलेकसम्मको क्षेत्र आफ्नो दाबी गर्दै समावेश गर्‍यो ।
नक्सा सार्वजनिक भएको चार दिन पश्चात् अर्थात् ६ नोभेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साको विषयमा सञ्चारमाध्यामहरुमा आएको समाचार र टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ती जारी गर्‍यो । विज्ञप्तीमा कालापानी क्षेत्र नेपालको भुभाग भएको भन्दै एकपक्षीय ढंगबाट हुने निर्णय नेपाल सरकारलाई अमान्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसो त ३ सय ७२ किलोमिटर खुल्लम खुल्ला सिमा मिचेको भारतले ७ नोभेम्बरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ जारी भएको राजनीतिक नक्साले अन्य देशको सिमा नमिचेको दाबी गरे । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले सार्वभौम भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने नक्सा जारी गरेको दाबी गरे ।
कार्तिक १६ गते शनिबार भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै सिमा विवाधको शुरुवात भएको होइन । भारत र नेपालको विचमा सिमा विवाद दशकौं पुरानो समस्या भएको एतिहासीक घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छ ।
भारतले पुनः करिव ७० वर्ष पुरानो समस्या वल्झाएको छ । विज्ञहरुका अनुसार अनुसार विवादको मुख्य कारण चाहिँ महाकाली नदिको मुहानलाई लिन सकिन्छ । नेपाली पक्षधर भारतले बनाएको कृतिम पोखरी र त्यहाँबाट बग्ने खोल्सीलाई आधिकारीक सिमा मान्न तयार छैन । भारतले लिम्पियाधुराको पूर्वमा कृतिम पोखरी बनाएको छ । तर नेपालले ४४ वर्षअघि पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको नक्शामा कालापानिदेखी उत्तरपूर्वको लिपु खोलालाई सिमा मानेको छ ।
अग्रज तथा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल व्रिटिस सरकारसँग १८६१ मा भएको सुगौली सन्धी र १८६० मा भएको सीमा सन्धीले नेपालको पश्चिम भुभागको सिमाना महाकालीको लिम्पियाधुरा भएको बताउँछन् । रिसाल विं.सं २०१८ को जनगणना लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा गरेको इतिहास छ ।
यो क्षेत्रमा भारतको सैन्य पोष्ट रहेको छ । तर, कहिलेदेखी सैन्य पोष्ट राखिएको हो यकिन तथ्य छैन । सन् १९५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले उत्तरी सिमामा भारतलाई १७ बटा सैन्य पोष्ट राख्न मार्ग प्रसस्त गरेको पाउन सकिन्छ । २०२६ सालमा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा १६ वटा सैन्य बल हटाइएपनि दार्चुलाको सैन्य पोष्ट कालापानीमा सारिएको इतिहास पाइन्छ ।
यस क्षेत्रमा इण्डो–तिव्वत बोर्डर फोर्स भारतले तैनाथ गरेको छ । चीन सङ्गको सम्बन्धमा उत्तरचढाव भइरहँदा भारतले यसलाई सामरिक दृष्ठिकोणले महत्वपूर्ण सिमाको रुपमा हेरेको छ । कार्तिक २३ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय तथा कुटनीतिक विभागले अयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वि.सं. २०३६ सालमा दार्चुला जिल्लाको प्रमूख जिल्ला अधिकारी रहेका द्धारिकानाथ ढुंगेलले सरकारले ७० अगाडी भारतलाई सिमा विस्तार गर्न दिनु गलत भएको बताए । उनले भनेका थिए–‘अतिक्रमण गरेकै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ, जबसम्म उसले सुगौंली सन्धीपछि नयाँ सन्धी भएको देखाउन सक्दैन।’
भारतले यो क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्र बनाएर चीनसँग व्यापार सम्झौता गरेको छ । सन् १९४५ मा भएको भारत र तिब्बतबीचमा व्यापार र आवतजावत सम्झौता यो भाग पनि नाकाको रुपमा प्रयोग गरिने सम्झौता भएको छ । यस्तै सन् १९९२ मा औपचारिक सम्झौता भएर लिपुलेक नाका खुलाउन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी सफल भएका थिए । २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री लि खछियाङ बिच भएको व्यापार सम्झौतामा पनि लिपु लेक लगायतका सहितको ४ बटा नाकाबाट व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता भएको छ ।
नक्सा सार्वजनिक भएसँगै नेपाली जनता विरोधमा उत्रिएका छन् । विशेषगरेर विद्यार्थी संगठनहरु सडकमा निस्किएर विरोध गरिरहेका छन् । नेकपा निकट अनेरास्ववीयू , कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले भारतीय दुतावास अगाडी विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । यस्तै स्वतन्त्र नागरिक देखी विभिन्न अभियानमा रहेका अभियान्ताहरु पनि विरोध गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘गो व्याक इण्डिया’ सहितको ‘प्रोफाइल’ राखेर विरोध गर्नेहरुको संख्या बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले भारतीय राजदुतलाई फोन गरेर नक्सा गलत भएको भन्दै नेपालको भुभाग नमिच्न आग्रह गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलन गरेर नक्सासम्बन्धी आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्दै भारतले नेपालसँगको सिमा हेरफेर नभएको भन्दै कालापानीमा पछि नहट्ने स्पष्ट मनसाय प्रकट गरिसकेको छ । नेपालले फितलो विज्ञप्ती जारी गरेर भुमि आफ्नो हो भने पनि अब दिर्घकालीन समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुको विकल्प छैन ।
कार्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलिय बैठक बोलाएर समस्या समाधानको प्रयास शुरु गरेका छन् । बालुबाटारमा बसेको सर्वदलिय बैठकमा कुटनीतिक पहलदेखी समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सम्मका सुझावहरु आएका छन् । बैठकमा सहभागी कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले भनेका छन्–‘महाकाली नदि पूर्वका सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय र कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ ।’ यस्तै पूर्व प्रधामन्त्री झलनाथ खनालले दिर्घकालीन समस्या खोज्नुपर्ने तर्क राखे । खनालले भने–‘लिम्पियाधुरालाई आधार मानेर सरकारले भारत नेपाल सीमा विवाद दिर्घकालीन रुपमा कुटनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई यो घटनालाई ऐतिहासीक अवसरको रुपमा चित्रण गर्छन् । सर्वदलिय बैठकमा उनले दुई देशीय वार्तामा प्रमाण जुटाएर विवादलाई दिर्घकालीन ढंगले समाधान गर्ने अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने तर्क राखे । यस्तै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी सन् १८२६ मा बनेको नक्साले विवादीत जमिन नेपालको भएको बताउँछन् । यस्तै राजपा संयोजक महन्त ठाकुरको वार्ता र संवादको माध्यामबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने तर्क छ ।
पत्रकार सम्मेलन गरेर नक्सासम्बन्धी आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्दै भारतले नेपालसँगको सिमा हेरफेर नभएको भन्दै कालापानीमा पछि नहट्ने स्पष्ट मनसाय प्रकट गरिसकेको छ । नेपालले फितलो विज्ञप्ती जारी गरेर भुमि आफ्नो हो भने पनि अब दिर्घकालीन समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुको विकल्प छैन । जनस्तरबाट विरोधका स्वरहरु बढेसँगै अब सरकार , परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री स्तरबाट कुटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ ।
पूर्व राजदुत तथा परराष्ट्र विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ सर्वदलिय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीले समाधानको पथ रोजेको बताउँछन् । ‘त्रिदेशीय बैठक बोलाएर लिम्पियाधुरामा सिमा स्तम्भ गाड्नु अबको पहिलो प्राथामिकतामा पर्नु पर्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्–‘एकपक्षिय र द्विपक्षिय वार्ता गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गरेर राष्ट्रसंघ गुर्हाने अन्तर्राष्ट्रिय अदात जाने सम्मक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’
दशकौं पुरानो समस्या समाधान गर्न नसके उनको राष्ट्रवादी छवि मौसमी बन्ने डर पनि उत्तिकै छ । सर्वदलिय बैठक बोलाएर सबै पार्टीको साथ सहयोग पाएका ओलीले जनस्तरबाट बढ्दो भारत विरोधी ‘सेन्टिमेन्ट’लाई क्याच गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
विज्ञहरुका अनुसार भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको भू–भागहरु कालापानी, लिपुलेक नेपालको भएको बारे पर्याप्त प्रमाणहरु रहेको बताएका छन् । त्रिविमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै सरकारका पूर्वसचिव द्धारिकानाथ ढुङ्गेलले सुगौली सन्धीको धारा ५ अनुसार नै नेपालको पश्चिमी सिमाको आधार रहेको बताउँदै सरकारले अब प्रमाणका साथ वार्ता गर्नुपर्ने खाचो औल्याए ।
नाकाबन्दी ताका राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरी राष्ट्रवादी नेता बन्ने अवसर मिलेको छ । सरकार बनेको दुई वर्ष वित्नलाग्दा अलोकप्रियता कमाउँदै गएको उनी नेतृत्वको सरकारलाई यो विषय समाधान गरेर जनताको मन जित्ने अवसर पाएको छ ।
दशकौं पुरानो समस्या समाधान गर्न नसके उनको राष्ट्रवादी छवि मौसमी बन्ने डर पनि उत्तिकै छ । सर्वदलिय बैठक बोलाएर सबै पार्टीको साथ सहयोग पाएका ओलीले जनस्तरबाट बढ्दो भारत विरोधी ‘सेन्टिमेन्ट’लाई क्याच गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । पूर्व राजदुत श्रेष्ठ दुई तिहाइ पाएको सरकारले समाधान गर्ने ल्याकत देखाउन सके अबको निर्वाचनमा तीन तिहाई ल्याउन कसैले रोक्न नसक्ने तर्क गर्छन् ।
सडक र सामाजिक सञ्जालहरुमा विरोध गरेर मात्र समस्या समाधान नहुँने तर्कहरु पनि रहेका छन् । यसका लागि कुटनीतिक हतियार र प्रमाण सहितका वार्ता नै निविकल्प हो । पूर्व रक्षा मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सांसद भिमसेन दास प्रधान पहिले जस्तै ६ महिने र ८ महिने सरकारको विकल्पमा पाँच वर्षे स्थायी सरकार भएको समयमा दिर्घकालीन तरवबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘म आफै रक्षामन्त्री हुँदा , शेरवहादुर देउवा , प्रचण्ड , झलनाथ र स्वयम् केपी शर्मा ओली समेत प्रधानमन्त्री हुँदा पन्छिदै आएको कुरा हो’, उनले भने–‘अहिलेको सरकारले समाधान गर्ने ल्याकत देखाउन सक्नुपर्छ।’